DHAGEYSO:Mukhtar Roobow dhabaha u xaaray inay Saraakiil Muhiim u ahaa Shabaab isi soo dhiibaan | Badweyn.com
DHAGEYSO:Mukhtar Roobow dhabaha u xaaray inay Saraakiil Muhiim u ahaa Shabaab isi soo dhiibaan
Sep 5, 2017 - jawaab
Tan iyo markii uu isi soo dhiibay Roobow Abuu Mansuur ayaa waxaa soo badanayo saraakiisha ka tirsan Shabaab ee soo galayo gacanta maamulka Koonfur Galbeed.
Gudoomiye ku-xigeenka degmada Xudur Aadan Cabdi Maxamed oo la hadlay Warbaahinta gudaha ayaa Sheegay Dagaalyahano ka tirsan Al-shabaab ay isku soo dhiibeen Maamulka Gobalka Bakool tan iyo markii Maamulka Koonfur Galbeed iyo Dowladda Dhexe uu isku soo dhiibay Sheekh Muqtaar Rooboow Cali Abuu Masuur oo ka mid ahaan jiray Hogaanka Sare Al-shabaab.
Guddoomiye ku xigeenka ayaa tilmaamay dhalinyaro ka tirsan Al-shabaab ay isku soo Dhiibeen Ciidamada Dowladda ee Magaalada Xudur sidoo kalena Rajaynayaan in Maalmaha soo socda ay isa soo dhiibaan Tobanaan ka mid ah Askarta Al-shabaab kuwaasi oo dhiiri galin ka helay Qaabkii Dowladda Soomaaliya ay kula Dhaqantay Sheekh Muqtaar Rooboow.
Dhankale Aadan Cabdi ayaa sheegay in la Adkeeyey Amniga Magaalada Xudur iyo Deegaanada Ku heeran si loo bilaabo Howlgalka Godoonka laga Saarayo Deegaano iyo Tuulooyinka ka tirsan Gobalka Bakool oo Wadooyinkii loo mari jiray ay xireen Al-shabaab iyo Kooxo Is baarooyin dhigtay oo dhibaatooyin badan geysta dadka Rayidka ah taasi oo Sababtay in Cabsi Darteed ay Xirmaan Qaarka mid ah Wadooyinka Muhiimka ah ee Gobalka Bakool.
Tallaabada ay dowladda kusoo dhaweysay Roobow Abuu Mansuur ayaa lagu tilmaamay inay aheyd istaraatiijiyad lagu doonayo in gacanta lagu soo dhigo saraakiil kale oo ka tirsan ururkaas oo dhibaato badan ku hayo shacabka Soomaaliyeed.